❝အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Leeds တွင် Foundation Year ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် International Year One in Business ပထမနှစ်တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရသည့် ကျောင်းသူ မစံထားခိုင်❞ – Crown Education
USA High School Diploma [GED]
USA Grade 12 [ACT-GAC]
CANADA Grade 12 [OSSD]
❝အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Leeds တွင် Foundation Year ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် International Year One in Business ပထမနှစ်တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရသည့် ကျောင်းသူ မစံထားခိုင်❞
Dec 25, 2021 ACT- GAC Scholarships, Student Testimonials
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Pandemicကာလအတွင်းမှာ ဒီအတိုင်း ထူးလာမှာမဟုတ်ဘဲ အသက်ကြီးသွားမယ့်အတူတူဆိုတော့ အချိန်လည်းမဆွဲချင်တာနဲ့ Onlineကနေ တက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။
Onlineကနေ လေ့လာသင်ယူရတာ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလဲဆိုရင် ညီမအနေနဲ့ 80%လောက် ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ အပြင်မှာ Face-to-Face တက်ရတာ ပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် Onlineကျတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စာလုပ်ချိန်ပိုများလာတယ်။
Self-studyလည်းဖြစ်တယ်၊ Reflectionတွေလည်း ရတယ်ဆိုတော့ Onlineကပဲ ဆက်တက်ဖို့တော့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Face-to-Faceအတန်းတွေ တက်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တော့ နိုင်ငံခြားသွားတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
မစံထားခိုင်အနေဖြင့် ယခုအခါ Covid-19 outbreakအလွန် UKကျောင်းသားဗီဇာများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အချိန်တွင် University of Leeds၏ တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်ကို အဆင်ပြေပြေသွားရောက်သင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သလို ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရမည့် ပညာရေးလမ်းကြောင်းတွင် အစစအရာရာအဆင်ပြေနိုင်စေရန်အတွက်လည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်။
.San Htar Khine
🌐Global Assessment Certificate (ACT-GAC, Grade 12 Program) တက်ရောက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် –
.မြန်မာဆယ်တန်း စနစ်ဟောင်း (သို့မဟုတ်) iGCSE / Grade 11 ပြီးမြောက်ထားတဲ့ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများအနေဖြင့် GAC Grade 12 Program တက်ရောက်ထားပါက ကနေဒါ-ယူကေ-သြစတြေးလျ-စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် Foundation ပြန်တက်ရန် မလိုအပ်ဘဲ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှ စတင်တက်ရောက်နိုင်ခြင်း၊
.အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် ဘာသာရပ်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူ ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်သည့်အတွက် အချိန်နှင့်ငွေကြေးကုန်ကျမှု သက်သာစေနိုင်ခြင်း၊
.Global Assessment Certificate (ACT-GAC, Grade 12 Program) ကို CROWN Education တွင် (၁)နှစ် တက်ရောက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာရှိ Rankingမြင့် တက္ကသိုလ်များတွင် အခက်အခဲမရှိ ဆက်လက်သင်ယူနိုင်ခြင်း၊
.မြန်မာဆယ်တန်း(စနစ်ဟောင်း)နှင့် iGCSE resultများတွင် ရမှတ်လိုအပ်ချက်ရှိသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်လည်း GAC Grade 12 Program တစ်နှစ်တက်ရောက် သင်ယူပြီး GPA ရမှတ်ကောင်းများရရှိအောင် ပြင်ဆင်ကာ နိုင်ငံတကာတွင် ပညာသင်ဆုများဖြင့် ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ခြင်း၊
.ACT နှင့် IELTS ရမှတ်ကောင်းများရရှိအောင် သင်ကြားပေးနေပြီး နိုင်ငံတကာ ဆယ့်နှစ်တန်းနှင့် ညီမျှသည့်အတွက် တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ရာတွင် အကန့်အသတ်မရှိဘဲ စိတ်ကြိုက်လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
CROWN Education & Royal Academic Institute မှာ သင်ကြားပေးနေတဲ့ GAC-Grade 12 Program ကို တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ စကားသံလေးတွေကို ပုံတစ်ပုံချင်းစီနဲ့အတူ မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
. အခုလိုကာလမှာ သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှုတွေ ရပ်တန့်မနေစေဖို့ GAC-Grade 12 Program သင်ယူလိုတဲ့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ မြန်မာဆယ်တန်း(သို့) iGCSE စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းများ၊ အမှတ်စာရင်းများ မရှိထားသော်လည်း ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ကြိုတင်လာရောက် ဖြေဆိုထားနိုင်ပါတယ်။
. ကလေးရဲ့ ဝါသနာနဲ့ အားသာချက် / အားနည်းချက်ပေါ် မူတည်ပြီး ဆက်လက်တက်ရောက်ရမယ့် နိုင်ငံနဲ့ ဘာသာရပ်ကို မိဘများနဲ့အတူ အသေးစိတ် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
. နိုင်ငံတကာသို့ သွားရောက်သင်ကြားမည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်စောင့်ဆိုင်းရင်း တိကျသေချာသော ပညာရေးလမ်းကြောင်း ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဘာသာရပ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ Scholarship အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ချင်တယ် ဆိုရင် GAC Grade 12 program မှာ တစ်နှစ်အတွင်း အချိန်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချ ပြင်ဆင်နိုင်ပါပြီ။
. 2022 အတွက် အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် GAC Grade 12 programနှင့်ပတ်သက်၍ https://crown.edu.mm/gac/ လင့်ခ်တွင် အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်သလို CROWN Education & Royal Academic Institute ရုံးဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သည့် 09 88-111-08-11, 09 88-111-01-22, 09 88-111-01-33, 09 88-111-01-44 သို့လည်း ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
❝အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Sussex တွင် Foundation Year ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း သိန်း(၅ဝ)ကျော်နှင့် ညီမျှသည့် ပညာသင်ဆုဖြင့် International Year One in Business and Management ပထမနှစ်တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရသည့် ကျောင်းသား မောင်အောင်ပိုင်မိုး❞
❝အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Birmingham တွင် Foundation Year ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် Bachelor of Science in Business Management ပထမနှစ်တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရသည့် ကျောင်းသူ မထွေးအိအိဝင်း❞
Dec 25, 2021 Crown Editor ACT- GAC Scholarships, Student Testimonials
iGCSE ပြီးပြီးချင်းမှာပဲ GAC Grade 12 Program တက်ဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ညီမရဲ့အစ်ကိုလည်း GAC Grade 12 Program(Batch-3)မှာတက်ခဲ့တော့ GAC Grade 12 Programရဲ့ သင်ကြားမှုတွေက လက်ရှိသူ့ရဲ့ တက္ကသိုလ်သင်ကြားရေးအတွက် တကယ်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြလို့သိခဲ့ရပါတယ်။ . GAC Grade 12 Programတက်ခဲ့တဲ့တစ်လျှောက်လုံး ဆရာ၊ဆရာမတွေရဲ့ အကူအညီတွေ အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းစာအပြင်Time Management Skills တွေ၊ Presentation Skillsတွေ၊ ...
Admin: အရင်ဆုံး Onlineကနေ သင်ဖို့ ဘာကြောင့် ရွေးဖြစ်သွားတာလဲ။ APM: On Campus သွားတက်ဖို့က အဆင်မပြေလို Onlineကနေပဲ အရင်တက်ထားတာပါ။ အဓိကကတော့ Covid -19 Pandemic ကြောင့်ပါပဲ။ . Admin: Onlineကနေ သင်ယူရတဲ့အခါ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ အခက်အခဲတွေရောရှိလား။ APM: အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ပုံမှန်ဒီအတိုင်းသွားတက်မယ်ဆိုရင် International Student တစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေများများရဖို့၊ ပြောရဲဆိုရဲဖြစ်ဖို့၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ နည်းနည်းခက်မယ်လို့ထင်တယ်ခင်ဗျ။ အခုလို Onlineက တက်ရတဲ့အခါ ...
❝အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Sussex တွင် Foundation Year ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့်အတူ မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း(၇ဝ)ကျော်နှင့် ညီမျှသည့် ပညာသင်ဆုဖြင့် International Year One in Computing ပထမနှစ်တက်ရောက်သင်ကြားခွင့်ရသည့် ကျောင်းသား မောင်ဟိန်းထက်ဝင်း❞
🇲🇲 မြန်မာနိုင်ငံမှာ GAC Program တက်ရောက်ခဲ့တာကြောင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ University of Sussex တွင် Foundation Yearကင်းလွတ်ခွင့်အပြင် မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း(၇ဝကျော်)နှင့်ညီမျှသည့် ပညာသင်ဆုဖြင့် International Year One in Computing ပထမနှစ်သင်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ မောင်ဟိန်းထက်ဝင်းအတွက် CROWN Education and Royal Academic Institute မိသားစုမှ အထူးဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ရမယ့်ပညာရေးမှာလည်း အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ .Hein ...
No. 275, 3rd Floor, Red Hill Tower, Pyay Road, Yangon, 1111